Delete Other Files from storage in Miui – Xiaomi Guide
Published December 7, 2018 by Thet Zaw Ko
Storage ထဲမှာ Other Files ဆိုပြီး ပြနေတာက ဘာတွေလဲ။ ဘယ်နေရာကဟာတွေ၊ ဘယ် files တွေကို ပြတာလဲ။ ဘာတွေကိုဖျက်လို့ရလဲ။ ဘယ်လိုရှာဖျက်ယူရမလဲ။ apk တွေ Install လုပ်ရင် file တွေ ဘယ်ပုံစံဝင်သွားမလဲ။ ဘယ်လိုတွေ အလုပ်လုပ်မလဲ.. စတာလေးတွေကို ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ ဖျက်တယ်ဆိုတာ လွယ်ပါတယ်။ သူတို့အလုပ်လုပ်တဲ့သဘာဝလေးတွေ သိနေရင် ဖျက်တာတင်မက ကိုယ်လိုချင်သလို ဖြစ်မလာတာ ဘယ်လိုကြောင့်တွေကိုး ဆိုတာမျိုး idea ရလာမှာပါ။ ဥပမာ ကိုယ်သုံးတဲ့ app တစ်ခုထဲက သီချင်းဆိုတာတော့ download လုပ်လိုက်တာပဲ။ Music ထဲလဲ မဝင်ဘူး.. ဆိုတာတွေမှာ ကိုယ့် app က ဘယ်ပုံစံအလုပ်လုပ်လို့ မပြတာကိုး ဆိုတာမျိုးလို idea တွေလဲ ရလာပါလိမ့်မယ်။
apk တွေ install လုပ်လိုက်တာနဲ့ ဘယ်ပုံစံဝင်သွားမယ်။ သူတို့တွေအလုပ်လုပ်တဲ့ Working Data Folder တွေက ဘယ်လိုရှိမလဲ။ ပြန်ဖျက်ချင်ရင် ဘယ်လို ဖျက်ပြီးရှင်းယူမလဲ… စတာတွေကို အရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ခင်ဗျာ။
facebook app ဆိုပါတော့ခင်ဗျာ။ Install လုပ်လိုက်မယ်ဆို သူတကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ apk file က /data/app အောက်ကို ဝင်သွားပါမယ်။ /data ဆိုတာ ကျနော်တို့တွေဖုန်းမှာ File Manager app ဖွင့်ကြည့်ရင် မမြင်ရပါဘူး။ ES File Manager, Root Explorer စတဲ့ app တွေနဲ့ root access ရထားပြီးမှ လိုသလို ဝင်တာ၊ ကူးတာ၊ ဖျက်တာတွေလုပ်နိုင်မှာပါ။ root ပြီးမှ အဲလိုတွေလုပ်လို့ ဘာလုပ်ရင် ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာတွေကတော့ မိမိက တတ်ကျွမ်းနားလည်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ firmware ပိုင်းဆိုင်ရာ partition တစ်ခုလို့မြင်နိုင်ပါတယ်။ apk တွေ Install လုပ်ရင် အဲသည်ထဲကို ဝင်ပါတယ်။ အဲသည် data partition size က ( app တွေ install ဖို့ပေါ့လေ ) ဘယ်လောက်လဲဆိုတာ အတိအကျသတ်မှတ်ထားတာတွေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ ကြုံတွေ့ဖူးတဲ့ Settings -> Storage ထဲမှာတော့ SD card တွေရော ထည့်ထားလို့ Available Storage က size အများကြီးလွတ်တယ်ပြပြီး apk တွေ Install မရဘူး။ Noti မှာ Storage full ဖြစ်နေပြီ ပြပြနေတယ်ဆိုတာမျိုးတွေ မြင်ရတာပါ။ ဒါက အဲသည်လို အစတည်းက size သတ်မှတ်ချက်ရှိလို့ပါ။ Settings -> Storage မှာ Available ပြနေတာသည် မိမိဖာသာ file တွေကို ကြိုက်သလိုကူးထည့်ထား…။ အဲသည်အတွက် ရတာကိုပဲပြတာပါ။ app တွေ install ထားတာ သိပ်များရင်တော့ သူတို့တကယ်ရှိနေတဲ့အပိုင်းက full ဖြစ်ပါပြီ ပြမှာပါပဲ။ သည်တော့ အသစ်သွင်းချင် အဟောင်းမလိုတာ ဖျက်ထုတ်တာ လုပ်ရတော့တာပေါ့ခင်ဗျာ…။
ထို့အတွက်ကြောင့် အောက်ကပုံလေးကို လေ့လာကြည့်ပါ။ Total ကတော့ 64GB ရှိတယ်။ တကယ်သုံးဖို့ လွတ်နေတာက 51GB ပဲလွတ်နေမယ်။ အောက်မှာ System Usage ဆိုတာသည် firmware ပိုင်းက လိုအပ်လို့ နေရာယူထားတဲ့ partitions တွေ အကုန်ရဲ့ Usage ပါပဲ။ app တွေ Install ရင် အဲသည် System Usage အပိုင်းတွေ သွားနေရာယူပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့မြင်နေရတဲ့ Internal Storage ဆိုတာသည် firmware ပိုင်း partitions တွေ အကုန်နေရာယူအပြီး လွတ်ကျန်နေတာကို /sdcard ဆိုပြီး Mount Point လုပ်ထားတာပါ။ အဲဒါကို File Manager app တွေက ပြပြိး ဘာတွေ ဘယ်လောက်ရှိတယ်။ ဘယ်လောက်လွတ်တယ် ဆိုတာတွေ ဖေါ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် System Usage ပိုင်းအတွက် နေရာယူထားရှိလို့ Available storage amount သည် ဖုန်း model မှာဖေါ်ပြထားတဲ့ Storage GB ဘယ်လောက်ဆိုတာနဲ့ ထပ်တူနီးပါး ကြမှာမဟုတ်ပါ။ System Usage နေရာခပ်များများယူထားပေးတော့ app တွေ များများ ထည့်လို့ရတယ်လို့ မှတ်ယူထားနိုင်တာပေါ့ခင်ဗျာ။ ဒါက file system ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကြမ်းဖျဉ်းသဘောလေးပါ။ သိပ်ပြီး Detail ကျတာကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ( ကျနော့်ဖုန်း Storage Usage ကမိုက်တယ်နော်.. အားရစရာကြီး.. ဘာမှမရှိသလောက်ပဲ.. 😀 😀 )
facebook ကို install လိုက်တာနဲ့ သူတကယ် loading လုပ်မယ့် apk file လေးက /data/app အောက်မှာရှိတယ်ဆိုတာ သိပါပြီနော်။ အောက်ကပုံလေးက ဘယ်ဖက်ကဟာက apk လေးရှိနေမယ့်နေရာပါ။ /data/app/com.facebook.katana ထဲမှာပါ။ /data/app/com.facebook.katana ဆိုတာက app developer က သတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့ manifest ထဲမှာပါတာဖြစ်ပြီး အဲသည်နာမည်နဲ့ folder ဆောက်တာပါ။ MIUI ကသိတဲ့ facebook ရဲ့ apk name ပါပဲ။ ညာဖက်က Working Data ပိုင်းဆိုတာကတော့ ကိုယ်တွေမြင်ရတဲ့ Internal Storage ထဲမှာ နေရာယူထားတာပါ။ app တွေရဲ့ Working data ပိုင်းက Internal Storage / Android / data ထဲမှာ ရှိပါမယ်။ apk နာမည်နဲ့ပဲ folder ဆောက်ထားတာပါ။ အဲသည်ထဲမှာ လူကြီးမင်းတို့ facebook ကိုဝင်တယ်။ Account name, password တွေကို save ထားမှာပါ။ Plain text တော့ မဟုတ်လောက်ဘူးပေါ့။ Hash တွေ ပါချင်ပါမှာပေါ့။ လူကြီးမင်းတို့က Video တွေ Auto Play တာမကြိုက်လို့ ပိတ်ထားတာတွေ..၊ Facebook Language settings တွေ စသည်ဖြင့် မိမိ Customize ထားတာတွေကို သည်မှာ မှတ်ထားမှာပါ။ Online မဖွင့်သော်လည်း လူကြီးမင်းတို့ နောက်ဆုံး Wall မှာ နောက်ဆုံး Posts, Photos တွေကို ဖွင့်ကြည့်လို့ရအောင် cache အနေနဲ့ သိမ်းထားတာမျိုးတွေ သည်မှာလုပ်တာပါ။ ဒါကြောင့် app ကို သုံးတာ ကြာလာလေ.. သည်နေရာက size က ကြီးလာလေပါ။ apk file လေးမူရင်းက 60MB လောက်ပဲရှိသော်လဲ App Info မှာကြည့်ရင် MB ရာချီတက်တက်လာမှာပါ။ အဲသည်သဘာဝပါ ပဲ။
APK Installation Behavior
Dual App နဲ့ပတ်သက်တာလေး ဗဟုသုတ ဆက်ပြောမယ်ခင်ဗျာ။ facebook ကို Dual app ပွားတယ်ဆိုပါတော့။ System data ပိုင်းမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ကတော့ MIUI က သူ့ဟာသူ control လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ Working Data ပိုင်းကတော့ Dual App အတွက် Dual App Storage တစ်ခု သတ်သတ်နေရာယူတယ်။ အဲသည်ထဲမှာ ထုံးစံအတိုင်း Android / data ဆိုပြီးရှိတယ်။ သူ့ထဲမှာမှ com. နဲ့စတဲ့ MIUI ကသိတဲ့ apk name နဲ့ folders တွေရှိတာပေါ့ခင်ဗျာ။ အောက်ကပုံလေးကိုကြည့်ပါ။ အဲဒါတွေက Mi File Manager နဲ့ဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Dual Apps Storage ဖက်ကိုသွားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဖက်က file တွေ အခြားတစ်ဖက်ကို ကူးတာ ရွှေ့တာ စတာတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပုံလေးကိုပဲကြည့်ပါ။
Dual Apps Storage
နောက်ထပ် idea တစ်ခုထပ်ပြောပါမယ်။ Android app တွေက Play Store နဲ့ချိတ်ဆက် အလုပ်လုပ်တာပိုများပါတယ်။ အခု factbook ကိုပွားလိုက်ချိန်မှာ Play Store နဲ့ချိတ်ဆက်သုံးနေတာဖြစ်လို့ Google service တွေပါ ပွားမယ်လို့လာပြောပါတယ်။ ပွားတဲ့ app မှာ အဲသည် Google service တွေပါချင်ရင်လုပ်ရမှာပါပဲ။ ဥပမာဗျာ.. Game တွေဆော့တယ်။ Google account မှာ ပိုက်ဆံထည့်ထားတာတွေလုပ်တယ်။ Game ထဲကနေ Item တွေဝယ်တယ်။ Google က ပိုက်ဆံကိုဖြတ်တယ်။ သုံးနေတဲ့ App တစ်ခုထဲက feature တစ်ခုကိုအစမ်းသုံးရတာ ကြိုက်လို့ ပိုက်ဆံပေးဝယ်တယ်။ Google Account ထဲက ပိုက်ဆံဖြတ်တယ်.. စသည်ဖြင့် သူတို့က ချိတ်ဆက်လုပ်နေတာပါ။ အဲလိုနားလည်ထားလို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် app တွေ သုံးချင်ရင် Play Store ထဲကသာဒေါင်းထည့်ပါ။ ကိုယ့်ဖုန်း Android ver api နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ app ကိုရပြီး ကျန်ကိစ္စတွေပါ အရာရာ ချိတ်ဆက်သုံးလို့ အဆင်ပြေမှာပါ။ facebook မှာဆို သက်ဆိုင်ရာ Android version အလိုက်.. သက်ဆိုင်ရာ CPU model အလိုက် apk file အနေနဲ့များစွာရှိပါတယ်။ သူများဆီက ကူးလာတာက ကိုယ့်ဖုန်းအတွက် မကိုက်ရင် ဖွင့်ကြည့်လို့သာရမယ်..။ စိတ်တိုင်းကျမဖြစ်တော့ပါဘူး။ သူများပြောသလို ဝင်လုပ်ကြည့်တာပဲ..။ လုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အသံတွေ ထွက်လာပါလိမ့်မယ်.. 😀 အဲသည် Google app တွေ သုံးရတာ အဆင်မပြေဖြစ်လို့ အကုန်ပြန်ဖျက်ပြီး Google Installer apk နဲ့ အဆင်ပြေအောင် ပြန်ထည့်တော့မယ်ဆို ( China rom တွေမှာ လုပ်ရတာပါပဲ။ သည်နည်းက Xiaomi ဖုန်းတွေ လက်စွဲပဲလေ….) ထည့်ထားတဲ့ Gapp ခြောက်ခုဖျက်ရတယ်။ ပြန်ထည့်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဖုန်းထဲရှိနေလို့ အသစ်ထည့်မရပါ error ပြနေတတ်တာသည် အခုလို Dual app တွေ ပွားချိန် Google service တွေပါ ပွားခဲ့လို့ပါ။ ဒါကြောင့်မို့ Dual app ပွားချိန် Google service ပါပွားတယ်လို့ မှတ်မိတာတွေ Dual app off ပေါ့။ မမှတ်မိတော့လဲ အကုန်ပေါ့ 😀 ။ အဲဒါတွေ Off ပြီး မိမိ Google app အသစ်ထည့်တာလုပ်ပေါ့။ Google service တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်တဲ့ app မဟုတ်ရင်တော့ Dual app ပွားချိန် ဘာမှမေးနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အောက်ကပုံလေးလို ထပ်မေးတာလေး တွေ့မှာပါ။ ဒါ facebook ကိုပွားချိန်မှာမေးတာပါ။ လူတိုင်းလဲ ပွားကြမှာပါပဲ 😀 😀 သည်လိုလုပ်လိုက်တာ ဘယ်နေရာတွေ ဘယ်လို effect ဖြစ်သွားတယ်တွေ သိထားရအောင်ပါ။ ခုနကရှင်းခဲ့သလို Dual App Storage တစ်ခုပွားလာတာမျိုး… Google Services တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဖြစ်သွားတာမျိုး… အစရှိတဲ့ idea လေးတွေပေါ့ခင်ဗျာ….။
အခုဆို apk တစ်ခု Install လုပ်တာနဲ့ System data ပိုင်းထဲ ဘယ်လိုလုပ်ပေးသွားတယ်။ User data ပိုင်းမှာ ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်။ ဘယ်နေရာက storage နေရာယူထားတဲ့ Size တွေကြီးလာတယ်ဆိုတာ သိလောက်ပါပြီ။ ထပ်ဆောင်းအနေနဲ့ Dual app နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေပါ ဗဟုသုတ သိနေပါပြီ။
App တစ်ခုသုံးရတာ သိပ်ကအဆင်မပြေချင်ဖြစ်လာရင် လုပ်ကြတာဘာလဲဆိုတော့ Clear Data လုပ်တာပါပဲ။ မှန်ပါတယ်။ အဲဒါကလည်း app ရဲ့ temporary data, cache တွေ clean ပေးပြီး ပြန်သုံးလို့ အဆင်ပြေစေတာ များပါတယ်။ Clear Data လုပ်ရင် ရှင်းလင်းပေးသွားတာက Internal Storage / Android / Data အောက်မှာရှိတဲ့ သူ့သက်ဆိုင်ရာ app ရဲ့ com. နဲ့စတဲ့ Folder ထဲက ဟာတွေ အကုန်ဖျက်ပေးသွားတာပေါ့။ Dual App အတွက်လုပ်ရင် Dual apps Storage / Android / Data ထဲကဟာပေါ့။ Install စလုပ်ကာစကအတိုင်း ဖြစ်အောင် မလိုတာတွေ ဖျက်သွားတာပါ။ သည်တော့ App Info မှာကြည့်ရင် Size နေရာယူတာ လျော့သွားပါမယ်။
App တစ်ခုကို Clear Data လုပ်မယ်။ Uninstall လုပ်မယ်။ App Info ကြည့်မယ်။ Permission deatil အကုန်စစ်မယ်။ ပေးမယ်။ Data usage ကို စစ်မယ်။ Detail control တွေအကုန်လုပ်မယ်ဆိုရင် Settings -> Install Apps ထဲဝင်ပြီး မိမိလုပ်ချင်ရာ App ထဲကို ဆက်ဝင်ရင် လိုသလို App Manage လုပ်နိုင်ပါပြီ။ ပုံမှာ facebook ကို Clear Data လုပ်တာ ပြထားပါတယ်။ facebook icon ဘယ်အောက်ထောင့်မှာ အဝါရောင်သော့ပုံလေးနဲ့က Dual App ပွားထားတာပါ။ Icon ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး ဘာလုပ်ထားလဲဆိုတာ ခွဲနိုင်တာပေါ့။
Clear Data ကိုရွေးလိုက်ရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း Warning လေးတော့ တက်လာတာပေါ့။ ကိုယ်က လုပ်ချင်မှတော့ လုပ်မယ်ပဲ ရွေးရတာပါပဲ။ လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ နေရာယူထားတဲ့ storage ပမာဏ ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါ။ အဲဒါ မူရင်း apk size လောက်ပဲဖြစ်သွားပါပြီ။
Clear All Data of app
App တစ်ခုကို သေသေချာချာ ရှင်းလင်းချင်ပြီဆိုရင်တော့ အထက်မှာပြောသလို Clear All Data လုပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆို မူရင်း apk size လောက်ပဲကျန်ပြီး ကျန်နေရာယူထားတာတွေလဲ Storage ထဲက လွတ်ပါပြီ။ ပြိးရင် App Info ထဲမှာ MIUI က သိနေမယ့် apk name ပေါ့လေ။ အဲဒါလေးဝင်ကြည့်မှတ်ပါ။ ပြီးရင် Uninstall လုပ်ချလိုက်ပါ။
APK name လေးကို မှတ်ပါဆိုပြီး com. နဲ့စတာလေးကို မှတ်ခိုင်းခဲ့တယ်နော်။ အဲဒါလေးကို app ရဲ့ working data fodler ထဲမှာ ရှာဖျက်လိုက်ပါ။ App တွေရဲ့ working data folder က နှစ်နေရာ ရှိနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုက Android / data နဲ့ နောက်တစ်ခုက Android / obb ပါ။ obb က Game, Offline Dictionary တွေလို Apk ကို install လုပ်..။ ပြီးမှ အင်တာနက်ဖွင့်.. လိုအပ်တဲ့ data ထပ်ဒေါင်းဆိုတာမျိုးတွေ လုပ်တတ်တဲ့ app လိုတွေမှာ /obb ထဲ သူတို့ Working Folder တွေရှိတတ်ပါတယ်။ Android / data, Android / obb အောက် နှစ်ခုစလုံးမှာလဲ ရှိတတ်တယ်ပါတယ်။ သည်တော့ နှစ်ခုစလုံးထဲ File Manager နဲ့ ခုနမှတ်ထားတဲ့ com. နဲ့စတဲ့ apk name folder လေးကို ဝင်ရှာပြီး Manual delete သာလုပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် မိမိမလိုတဲ့ app ကိုလဲ Clear Data / Uninstall ပြိးပြီ။ သူနဲ့ပတ်သက်တာတွေ ဖျက်ပြီးပြီဆိုရင် Other Files ဆိုတာအောက်မှာ လာပေါ်ပြီး ပြနေတာတွေ အတော်လျော့နည်းသွားမှာပါ။
ES File Explorer လို Third Party file manager တွေနဲ့ဝင်ရှာဖျက်တာ လုပ်ပါ။ ပိုအစွမ်းထက်ပါတယ်။ App တော်တော်များများက Uninstall ရင် /data/app ထဲကဟာသာ သွားဖျက်ပေးတာပါ။ မိမိကလည်း root မရှိရင် manual ဖျက်မရဘူးလေ။ Internal Storage ထဲက data, obb တို့အောက်က သူတို့ Working Folder ကို ဖျက်ပေးခဲ့တာနဲပါတယ်။ သည်တော့ Game တွေလိုမျိုး ပြန်ဖျက်တယ်။ အဲသည် obb အောက်ကဟာတွေကျန်နေရင် သူတို့တွေက file size ကြီးတွေမို့ App သာ Uninstall လုပ်လိုက်တယ် ( Clear Data နမူနာပုံလေးတွေမှာ clear မလုပ်ခင် app နေရာယူထားတဲ့ storage ပမာဏနဲ့ clear ပြီး မူရင်း apk size လောက်ပဲ ကျန်ပမာဏကို ယှဉ်ရင် apk က size ခပ်သေးသေးတွေပါ ) ကျန်တာတွေရှိနေလို့ Other Files နေရာ size ကမလျော့..။ Storage ထူးမလွတ်တာတွေ ဖြစ်ရတာပါ။
App တွေကို Management လုပ်ချင်လို့ Settings -> Installed apps ထဲဝင်ကြည့်တာ ကိုယ့်ထဲက app တွေ အကုန်မပေါ်ဘူးဆို သည်ပုံလေးအတိုင်းလုပ်ခင်ဗျ။ MIUI 9.5 နဲ့အထက်လောက်.. အခု MIUI 10 ပေါ့လေ။ အဲသည်မှာက သည်တိုင်းဝင်ရင် ပြတာက အမြဲလိုလို သုံးနေတတ်တာကိုပဲ ဦးစားပေးပြထားတယ်။ သည်တော့ အကုန်မတွေ့ဘူး။ သည်တော့ အက္ခရာစဉ်နဲ့ အကုန်မြင်ချင်ရင် အောက်ကပုံလေးလိုလုပ်ပြီး ရှာဖွေပါခင်ဗျ..။ အောက်ပုံလေးမှာ ပုံ ၁ လေးက ဖုန်းထဲရှိသမျှ app အကုန်ပြခိုင်းလိုက်တာ..။ အကုန်ပေါ်လာရင်တော့ ပုံ ၂ လေးအတိုင်းလုပ်ပေးလိုက်ရင် A to Z အစဉ်လိုက်အတိုင်း app name လေးတွေ ရှာဖွေဖို့ လွယ်သွားပြီပေါ့ခင်ဗျာ…။
အိုကေ.. အခုလောက်ဆို App တစ်ခုကို လုံး၀ clean ဖြစ်အောင် Uninstall လုပ်တာ.. သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ working folder ကိုပါ ရှာဖျက်ပေးတာကို လုပ်တတ်ပြီဆိုတော့ မိမိရှင်းချင်တယ်ဆိုတာ ပြည့်ပြည့်၀၀ရှင်းထုတ်နိုင်ပြီ.. လုပ်တတ်လောက်ပါပြီ။
အခုမှ Other Files ဆိုတာကြီးကို သေချာလေ့လာမယ်ဗျာ။ အဲဒါက ဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင် Android OS အနေနဲ့ ဘယ် file အမျိုးအစားတွေကတော့ Movies ( mp4, avi, wmi, စသည်ဖြင့်… ) ဘယ်ဟာတွေကတော့ Compress files တွေ ( Zip စသည်.. rar, 7z, iso တွေလို compress တွေ မသိဘူးခင်ဗျ.. ဖုန်းမှာအသုံးချတဲ့ဟာတွေလဲမဟုတ်တတ်တော့ သူနားလည်အောင် လုပ်မထားတာလဲ မဆန်းပါဘူး 😀 ) ဘယ်ဟာတွေက Songs တွေ.. ဘယ်ဟာတွေက Photo images တွေ.. ဘယ်ဟာတွေက Documents တွေ ( အဓိကက PDF ကိုပဲ သတ်မှတ်ပေးတာများပါတယ်…) စသည်ဖြင့် သိပါတယ်။ App တွေ Install လုပ်ရင်လဲ အဲသည် app တွေက ဘယ် file type တွေဟာဆိုရင်ဖြင့် သူတို့ဖွင်ြ့ပီး အလုပ်လုပ်တာမျိုး လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်လို့ OS နဲ့တွဲစပ်အလုပ်လုပ်ပေးပါတယ်။ ကွန်ပျူတာမှာလိုပေါ့.. Microsoft Word, Excel တို့ ထည့်သွင်းပြီးရင် docx, xlsx တို့ကို double click တာနဲ့ app ကတန်းဖွင့်ပေးပြီလေ။ အဲသည် app တွေမရှိခင် Windows က ဒါဘာကြီးတုံး.. ဘာနဲ့ဖွင့်မှာလဲဟ ဆိုတဲ့သဘောမျိုး Box တက်လာပြီး မေးတာပဲမလား.. 😀 အဲသည်သဘောပါပဲခင်ဗျာ..။ Facebook လို app တွေထည့်သုံးတာက ဒါမျိုး ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ.. ။ Browser မှာ web site တွေကြည့်ရင် facebook link တွေပါလာလို့ နှိပ်မှ အဲဒါကို အခုက ဖုန်းမှာမို့ ပိုသုံးလို့ကောင်းအောင် Facebook app နဲ့ဖွင့်ပါလားလို့ suggestion ပေါ်လာတာမျိုးလောက်ပဲရှိတာပါ။ VLC လို media player app ထည့်ထားရင် ဖုန်းမှာပါတဲ့ Video Player ကမသိတဲ့ media file type မျိုးတွေကို သူက Handle လုပ်ပေးမှာပါ။
ဘာပဲပြောပြောပါခင်ဗျာ။ အထက်မှာပြောပြထားသလို အချို့သော File အမျိုးအစားတွေကလွဲပြီး ကျန်တာတွေကို OS က ( MIUI ပေါ့လေ ) မသိတာမျိုးဆိုရင် အဲဒါသည် Other Files ပါပဲ။ Settings -> Storage ထဲမှာ ဘယ်အမျိုးအစား file တွေက ဘယ်လောက်နေရာယူတယ်ပြတယ်။ ဖုန်းမှာ တစ်ပါတည်းပါလာတဲ့ Mi File Manger ထဲဝင်ကြည့်ရင် ဘယ် file အမျိုးအစားတွေရှိတယ်.. အရေအတွက် ဘယ်လောက်တွေရှိတယ်.. စတာတွေကို ဝင်ဝင်ချင်းပြတာပါပဲ။ အဲသည် lists တွေထဲမှာ မသိတဲ့ files တွေဟာ Other Files ပါပဲခင်ဗျာ။
ဥပမာ ကျနော့်အနေနဲ့ဆိုရင်ပေါ့ဗျာ.. တစ်ခါတလေ ခရီးသွားရင်း ဖုန်းနဲ့ပဲ အင်တာနက်သုံးလို့ ကိုယ် Download လုပ်ချင်စရာလေးတွေ ရှိလာတယ်ဆို ဖုန်း browser မှာ ဖတ်နေရင်းပဲ ဒေါင်းထားလိုက်တာပါပဲ။ အဲဒါတွေဆို ကွန်ပျူတာမှာသုံးတဲ့ ISO file တွေဖြစ်မယ်။ Software တွေက ချုံ့ပေးတာ rar, 7z တွေပဲ များတာပါ။ အဲဒါတွေ ဒေါင်းမယ်ဆို ဖုန်းထဲက Downloads folder ထဲရှိနေမှာပါ။ အဲလိုတွေကို Storage မှာ ဝင်ကြည့်ရင် Other Files ပဲပြမှာပါပဲ။ ကျနော့်အနေနဲ့ မိမိ ဒေါင်းထားတာတွေသည် Downloads folder ထဲမှာရှိတယ်။ အဲဒါတွေကို မိမိဖာသာ ကွန်ပျူတာမှာချိတ်ရှာ၊ ပြန်ကူးရမယ်။ ဖုန်းထဲမှာ ဖျက်ပေးရမယ်.. စသည်ဖြင့် ကိုယ်လုပ်တာ ကိုယ်သိထားမှ သည် Other Files ဆိုတာကြီး နေရာလျော့မှာပေါ့။
သည်တော့ app, games တွေသွင်းထားတယ်။ အဲဒါတွေရဲ့ working folder ထဲ ( Android / data or Android / obb ) ရှိနေတာတွေဟာ Other Files တွေပါပဲ။ ဒါတွေက သည်တိုင်းဖျက်မယ်တော့ မရဘူးပေါ့။ ဖျက်ရင် apps, games တွေ အလုပ်လုပ်ချင်မှလုပ်တော့မှာပေါ့.. သည်တော့ သူ့မူရင်းလဲဖျက်မယ်။ ကျန်တာ မိမိဖာသာ ရှာဖျက်မယ်ဆိုတာလုပ်ရင် အဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Other Files ကိစ္စ ရှင်းပါတယ်။ လုပ်နည်းလဲ အထက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ ပြထားခဲ့တာပဲခင်ဗျာ။ Other Files ပဲလျော့ချင်တာ.. app, game ဖျက်ချင်ဘူး.. ဟိုဟာတွေပဲ ဖျက်လိုက်မယ်လေတော့ လုပ်မရဘူးပေါ့ခင်ဗျာ.. နှစ်ခုအတွဲအစပ် ရှိမှ အလုပ်လုပ်မှာလေ….။
မိမိဖာသာ သုံးတဲ့ပုံစံကြောင့် Other Files ဆိုတာကြီး size ကြီးလာတယ်ဆိုတာ အထက်မှာ ဥပမာပြောပြိးပြီ…။ app, games တွေကြောင့်လဲ အဲသည် Other Files ဆိုတာ ဘယ်လို effect ရှိလာမယ်။ ရှင်းချင်ရင် ဘယ်လိုရှင်းရမယ်ဆိုတာ အထက်မှာပြောပြီးပြီ။ နောက်တစ်ခုထပ်ပြောပါအုံးမယ်။ ဥပမာပေါ့.. ။ Facebook Video downloader , Youtube downloader လိုမျိုးတွေ ဆိုပါတော့..။ App တွေ install တယ်။ သူတို့ working folder တွေ ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာတွေ သဘောပေါက်ပြီးဖြစ်မှာပါ။ အဲဒါတွေသုံးပြီး Video တွေ ဒေါင်းမယ်ဗျာ။ များပြားစွာဒေါင်းမယ်။ ပြီးလဲပြီးရော ကျနော် ကျမတို့ ဒေါင်းထားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေ အများကြီးပဲ… Video Player, Mx Player စတာတွေမှာပေါ့.. မပေါ်ဘူး.. သက်ဆိုင်ရာ app ထဲဝင်ရင်တော့ အကုန်တွေ့တယ်။ ကြည့်လို့ရတယ် ဆိုတာမျိုးတွေ.. အဲဒါတွေက ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုရင် အဲသည် app တွေက သူတို့ဒေါင်းထားတဲ့ media file တွေကို သူတို့ရဲ့ working folder ထဲမှာပဲ သက်ဆိုင်ရာ Folder ဆောက်ပြီး ( Download လို့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ) အဲသည်ထဲမှာ ထည့်တာပါ။ အဲသည် Android/data or Android/obb အောက်မှာရှိတဲ့ media file လိုမျိုးတွေ.. ( movies, songs, photos စသည် ) ဟာ အခြားသော app များမှာ မပေါ်ပါဘူးခင်ဗျာ.. ။ သူ့သက်ဆိုင်ရာ app ထဲပဲ ပေါ်ပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုရင် အောက်ပါပုံလေးတွေမှာကြည့်ပါ။ Android / data, Android / obb အောက်မှာ .nomedia ဆိုတဲ့ file လေးတွေတွေ့မှာပါ။ File Manager တွေ Settings ထဲမှာ Show Hidden files ဆိုတာမျိုး ON ထားပေးမှပေါ်ပါမယ်။ Android မှာ ရှေ့က . နဲ့စတဲ့ folder, files တွေဟာ သာမာန် Display ပြတဲ့ထဲ Hide ထားပါလို့ဆိုလိုတာပါ။ Mi File Manager ထဲက Hide နဲ့မတူဘူးနော်။ သူက Encrypt လုပ်၊ password တွေ ခံပြီး Hide တာ။ သူ့ app နဲ့သူပြန်ဖွင့်မှာ မြင်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေ….။ အဲဒါလေးတွေ အဓိပ္ပာယ်က media files တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ Android/data or Android/obb အောက်မှာ လာရှာတာတွေ မလုပ်နဲ့လို့ ညွှန်ကြားထားတဲ့သဘောပါပဲ။ အဲဒါကြောင့် MX Player လိုဟာမျိုးတွေကလည်း လာမရှာပါဘူး။ Internal Storage ထဲရှိ အခြားသော folder များအောက်သာ ရှာပြီး ဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာမျိုးပြပေးမှာပါ။ Gallery ထဲလိုမျိုးဆိုလည်း Video file တွေက နဲနဲလေး.. ကျနော်ဒေါင်းထားတာက အများကြီးပဲ.. သည်မှာလဲမတွေ့ဘူးဆိုတာတွေဟာ အဲသည် .nomedia file ကြောင့်ပါပဲ။ အဲဒါရှိနေရင် ရှိနေတဲ့ Parent folder နဲ့ သူ့အောက် sub folder တွေထဲ media files တွေ ရှာဖွေတဲ့လုပ်ငန်းကို မလုပ်တော့ပါဘူး။ Zapya ကိစ္စတွေလဲ သည်အတိုင်းပဲခင်ဗျ။ Play Store ကနေဒေါင်းထည့်ပြီး ကိုယ့်ဖုန်းနဲ့ကိုက်တဲ့ Zapya သုံးနေရင် ဘာမှမဖြစ်ဘူးခင်ဗျ..။ Internal Storage ထဲမှာ Zapya Folder လေးတစ်ခုရှိတယ်။ သူ့အောက်မှာ သက်ဆိုင်သလိုတွေ ရှိပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့ zapya ကုးတာတွေက အခြား app တွေမှာလဲ လိုသလို category အလိုက်တွေ မှန်ကန်စွာပေါ် အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ကြုံသလို ကုူးလာတဲ့ zapya version လိုမျိုးမှာ ကိုယ့်ဖုန်းနဲ့မကိုက်ရင်ကတော့ သူ့ working data folder မှာပဲ လိုတာ အလုပ်လုပ်တဲ့ zapya နဲ့တွေ့မှာပါပဲ။ အဲလိုဆို အခုလိုတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အဲလိုဆို အဲသည် .nomedia တွေဖျက်လိုက်မယ်ဗျာ.. အိုကေပေါ့… No.. No မလုပ်နဲ့ခင်ဗျ.. 😀 ဥပမာ Viber က စတစ်ကာတွေပို့တယ်.. Viber contact တွေရဲ့ profile ပုံ thumbs တွေရှိမယ်.. facebook messenger စတစ်ကာတွေပို့မယ်… စသည်လိုတွေရဲ့ thumbs media တွေက သူ့ app သူ အလုပ်လုပ်ဖို့ အများကြီးရှိနေတတ်တယ်ခင်ဗျ.. အဲသည် .nomedia ဖျက်ရင် Gallery ထဲ တပြုံကြီး ပေါ်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အချို့ app တွေကတော့ သူတို့ working folder မှာပဲအဲလိုတွေ သိမ်းတဲ့ သူတို့ folder ထဲမှာ သူ့ဟာသူ .nomedia တွေ ဆောက်ပါတယ်။ သည်တော့ လျှောက်မပေါ်ဖို့ သူ့ဟာသူ safe ဖြစ်တာပေါ့ခင်ဗျာ…။ ဥပမာ messenger sticker တွေ လျှောက်ပေါ်လာနေလို့ဆိုရင် သူ့ working data folder ကိုရှာ… (အထက်မှာ App info မှာ APK name ကို ကြည့်မှတ်လို့ပြောထားဖူးတယ်နော်..) လိုက်ဝင်ကြည့်.. အဲလို media files သေးလေးတွေ တွေ့ရင် .nomedia ဆိုတဲ့ဟာ မရှိပါက မိမိဖာသာ Create လုပ်ပေးလိုက်.. အဲလိုဆို အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ ES File Explorer လိုမျိုးနဲ့ create လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Mi File Manager ကတော့ရှေ့ဆုံးမှာ . နဲ့စတာတွေ လက်မခံပါ။ .nomedia ထားတာက app က သူ့ဟာသူသုံးဖို့ လုပ်ထားတာလေးတွေ…။ User အတွက်မဟုတ်ဘူး။ သည်တော့ Gallery လိုထဲ ပေါ်စရာမလိုဘူး .. အဲလို app သဘာဝတွေပေါ့။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် version မကိုက် app သုံးမိလို့ ကိုယ့်တကယ်သုံးရမယ့် data တွေကလဲ အဲလို folder တွေထဲရောက်နေရင် မိမိဖာသာ လိုက်ရှာပေါ့။ ကူးထုတ်ရမှာပေါ့။
အခုလောက်ဆို file types တွေ ကခုန်ခြင်း တော်တော်လေး သဘောပေါက်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ Tips လေး အနည်းငယ် ထပ်ပြောပြပြီး နိဂုံးချုပ်တာပေါ့ခင်ဗျာ…။ 😀 မိတ်ဆွေတို့ လင့်တွေပေးလို့ ဝင်တယ်။ ဒေါင်းပါဆိုလို့ဒေါင်းတယ်။ ပြိးရင် Noti မှာ ပြိးပြီပြတယ်။ Open လုပ်ဖို့ ပြတယ်။ နှိပ်ပြီး Open တယ်။ Error ပြတယ်။ အဲဒါဘာလို့လဲဆိုရင် အထက်မှာ ရှင်းပြထားသလို ကိုယ်ဒေါင်းလိုက်တဲ့ File type ကို Handle လုပ်နိုင်တဲ့ app ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာ မရှိလို့ပါ။ သာမာန်အားဖြင့် File တစ်ခုကို နှိပ်တာနဲ့ ဖွင့်တယ်ဆိုတဲ့ Action တစ်ခုလုပ်တယ်။ သည်ဟာကို Handle လုပ်နိုင်တဲ့ app ကပွင့်လာတယ်။ ဆက်လုပ်တယ်ပေါ့။ APK file ဒေါင်းထားတာ နှိပ်လိုက်ရင် Package Installer တက်လာမယ်။ Install လုပ်ဖို့တွေမေးမယ်။ လုပ်မယ်။ ရမယ် မရဘူးတွေ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်.. 😀 ဒါသဘာ၀ အမှန်ပါပဲ။ ချက်ချင်း လုပ်ပေးတာတွေက ဘယ် app နဲ့ ကိုင်တွယ်ပါလို့ သတ်မှတ်ပေးထားလို့ပါ။ Default app တွေ Settings ထဲ ထားပေးထားတယ်ပေါ့ခင်ဗျာ။ မထားထားရင်တော့၊ ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာလဲ handle လုပ်နိုင်တဲ့ app သုံးလေးခုလောက်ရှိရင် ဘာနဲ့ဖွင့်မလဲ လာမေးတာ ကြုံဖူးမှာပါ။ အဲဒါသဘာဝပါ။ Handle လုပ်နိုင်တဲ့ app ဖုန်းထဲထည့်ထားတာမျိုး မရှိရင်ကတော့ Cannot Open ပေါ့။ ဘာလုပ်ရမလဲ။ ဖွင့်ကြည့်နိုင်ဖို့ app ရှာထည့်လေ.. 😀 😀 Default app တွေ Set လုပ်ထားဖို့အောက်ပါပုံလေးအတိုင်းဝင်လုပ်တာပါ။ သက်ဆိုင်ရာ file type ကို handle လုပ်နိုင်တဲ့ app ဖုန်းထဲရှိပါက ရွေးချယ်ပေးနိုင်ရန် list ထဲပါလာမှာပါ။
ပုံလေးမှာကြည့်ရင် Not Selected တွေ တွေ့မှာပါ။ ဒါက အဲသည် file အမျိုးအစားကို ဖွင့်ပေးနိုင်တဲ့ App တစ်ခုထက်မကပိုရှိလို့ ဖုန်းက မရွေးပဲ ထားတာပါ။ လူကြီးမင်းတို့ file ဖွင့်ရင် ဘာနဲ့ဖွင့်မလဲ ပေါ်လာမှာပါ။ အဲသည်မှာ App ရွေး၊ Remember ထား.. အဲလိုဆို သည်ထဲက Default ထဲရောက်သွားပါမယ်။ မိမိဖာသာလဲ ခုနေရာမှာ ချိန်းပြောင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာတွေလုပ်မိလဲသိဘူးဗျာ..။ ဘာတွေဖြစ်မှန်မပြောတတ်တော့ဘူးဆိုလဲ အောက်ဆုံးမှာ Reset to Defaults ဆိုတာ ပါပါတယ်။ နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးမှ လိုသလို ပြန်ရွေးချယ်ပါ။ အခုဆိုရင် File type တွေ app တွေ အလုပ်လုပ်ပုံသဘောပေါက်လောက်ပါပြီ။ ဖျက်ထုတ်ချင်လဲ လုံး၀ အရှင်း ဘယ်ပုံ clean မယ်တွေ နားလည်လောက်ပါပြီ။ app, files တွေ သဘောတရားသိပြီး ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတော့ ဘယ်ပုံလုပ်ယူမယ်။ ဘာကြောင့် ခုလိုတွေ ဖြစ်နေတယ်.. စသည်ဖြင့်… ခန့်မှန်းတတ် လုပ်တတ်လောက်ပါပြီခင်ဗျာ….